रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भयो ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी – Jagaran Nepal
रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भयो ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी
थानेदारसहित सबै प्रहरी र गाउँका केही गन्यमान्य व्यक्ति जन्ती बने। विवाहपछि बेहुला बेहुलीले थानेदारको गोडा छोएर आशीर्वाद लिए।यसपछि केटी परिवारसँग बिदा लिएर आफ्नो बेहुलाको घर गइन्। दैनिक भास्करबाट